Imaraadka Oo Gawaadhida Aan Xabo Karin Ku Soo Daad Gureeyay Soomaliya Iyo Qorshaha Uu Ka Leeyahay – somalilandtoday.com
Imaraadka Oo Gawaadhida Aan Xabo Karin Ku Soo Daad Gureeyay Soomaliya Iyo Qorshaha Uu Ka Leeyahay
(SLT-Muqdisho)1-dii November, 2018 waxaa garoonka diyaaradaha Garowe ka degtay diyaarad magaalada Muqdisho ka soo qaaday gaadhi nooca aan xabadu karin ee Bulletproof-ka loo yaqaano, kaas oo loo watay Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye oo kamid ah musharaxiinta Puntland 2019.
Hadal hayn badan ayaa ka dhalatay gaarigaas, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku taageertay musharaxa, balse musharaxa Jabiye oo wareysi gaara siiyay Deperani Media ayaa sheegay in gaariga uu ka soo gatay dalka Mareykanka, uuna haysto cadeymo, inkastoo aan cadeymahaas la soo bandhigin.
Hadaba maxaa ka jira sheegashada musharaxa ee ah in uu gaarigaas ka soo gatay dalka Mareykanka iyo eedeynta ah in dowladda federaalku siisay?
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helay Villa Somalia ayaa sheegaya in gaadhigaas dowladda Soomaaliya siisay musharax Jabiye, uuna kamid ahaa gaadiid noocaas ah oo ilaa 2014, yiilay Madaxtooyada, labo kamid ah gaadiidkaas waxaa dhawaan laga dejiayay Baydhabo, halka midna laga dejiyay Garowe.
Cadaymaha kale ee loo hayo arrintan ayaa ah in 5 June 2014 dowladda Imaaraadka Carabta 11 gaadhi ah nooca aan xabada karin ugu deeqday madaxda dowlada federaalka Soomaaliya, sawiradii xiligaas la soo bandhigay waxaa ka muuqda isu ekaansho ah labada gaari ee Baydhabo laga dejiayay iyo midka Garowe laga dejiyay.
Dhanka kale marka la eego sheegashada musharax Jabiye ee ah in uu gaarigaas ka soo gatay dalka Mareykanka, waxay ka hor-imanaysaa xeerar caalami ah oo uu kamid yahay qaraarkii (Resolution 733) ee bishii January ee sanadkii 1992-dii Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ku soo rogtay dalka Soomaaliya, taas oo ahayd cunaqabateyn dhanka hubka ah, waxaana la ogyahay in gaadiidka aan xabadu karin ee Bulletproof-ka uu kamid yahay hubka cunaqabateyn laga saaray Soomaaliya.
Sidaan ognahay cidii u baahata gaadiidka noocaan ah in ay Soomaaliya keento, waxay martaa geedi socod aan u dheer oo ay kamid tahay in Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka haysato ogolaansho, inta badan waxaa loo ogalaadaa hay’adda caalamaid ah ee ka howlgala Soomaaliya, waana adag tahay amaba ma dhicin in qof shacab ah ogolaansho la siiyo.
Dowladda Soomaaliya xaq ayay u leedahay in ay dadka qaar u garato gaadhi noocaan ah, iyadoo u eegeysa duruufo amni ee qofkaas, balse maaahan in xaqiiqada laga fogaado oo shacbaka been loo sheego.